Europe's Must See Places Of Worship | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Kumelwe Kowona Bona Places Of Unqulo
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 01/08/2021)
IYurophu ekhaya lokuba wazi imbali yenkcubeko kunye izakhiwo omangalisayo, uninzi lwazo ifakwe nge ukuqokelelwa yelizwekazi enkulu iindawo zonqulo. Yiloo nto namhlanje, siye lirhangqwa phezulu 3 ukuba siqwalasela ukuba ingundoqo kufanele-ubona, ufihla izakhiwo kwihlabathi-edumileyo lonke ezinye izixeko edume eYurophu.
1. St Peter xa Basilica, esikaPhapha
Ibekwe ngaphakathi iindonga uhlanga ehlabathini luncinane, esikaPhapha, St Peter xa Basilica ngokungathandabuzekiyo enye uqulukubhode ezinkulu impucuko ngayo ngezakhiwo kunye nobugcisa. ngoku umtsalane enkulu umzobo 10 iindwendwe million ngonyaka, le sakhiwo mihle engama St Peter xa Square kwaye inama i opulent indibanisela art wembali, Iikholamu zemabhile, kunye nedome enemibala enemibala eyilwe nguMichelangelo (apho ekhwela encotsheni, Kufuneka ube nesibindi uthathe kwi 491 amanyathelo endleleni!).
Nangona oku indawo ethandwa phakathi ngabakhenkethi, kusekho eqinile isinxibo enyanzeliswa ukuba kufuneka ulumkele ngaphambi kokuya. Kufuneka unxiba ibhulukhwe elide (injongo akukho iibhulukhwe, kungakhathaliseki ukuba shushu ilanga Italian i), kunye namabhinqa ukuba baqabe izikethi ngaphezu ubude idolo. Amagxa kufuneka kwakhona kuhlawulwa zonke izini ngawo onke amaxesha.
St Peter xa Basilica ivuliwe imihla ukususela 7 am-7pm ngo-Epreli ukuya kuSeptemba no-7 am-6pm ukususela ngo-Oktobha ukuya kuMatshi. Entry ukhululekile (nangona kukho imirhumo sokwamkelwa amacandelo ticketed, ezifana St Peter xa Treasury kunye St Peter xa Dome), kunjalo, kuba uyazi ukuba umgcelele ingaba elide, ngenxa yabavavanyi kunye nokhuseleko moya-style kufuneka adlule kuqala.
Ifunyanwa phakathi kwisixeko transcontinental Turkey kaThixo, Istanbul, Sultan Ahmed Mosque ngokuqhelekileyo obizwa ngokuba The Blue Mosque ngenxa nezibilini zayo unique blue. Ezakhiwe Ottoman Sultan Ahmed I phakathi 1609 yaye 1616, le isakhiwo ithabathekisayo izenzo labenza Umtsalane woKhanketho enkulu kunye kwindawo esebenzayo yonqulo, okuthetha mosque ivaliwe kwi non-abanquli ngexesha imithandazo ezintlanu ngosuku – Amaxesha okuthandaza angajongwa apha phambi kokuba uye.
Kukho i engqongqo isinxibo ikhowudi ukuba zonke iindwendwe kufuneka ithobele phambi kokuba bangene mosque. Okokuqala, izihlangu kufuneka isuswe kwaye mazifakwe kwisingxobo ecacileyo yeplastiki ebonelelwe lokukhonzela simahla – wena ke ube ukhetho ushiye iimbadada zakho emngxunyeni cubby okanye ukuthwala isikhwama nawe. Xa kuziwa impahla yakho, amadoda opt impahla loose nokuqinisekisa imilenze zabo lwazigubungela ulwandle, izinto uphambuke ezintethweni ezifana nempahla yokuthintela kunye ibhulukhwe. Abasetyhini kufuneka banxibe iimpahla ezikhululekileyo ngelixa beqinisekisa iingalo zabo, imilenze, neenwele ziyafundiswa kuzo zonke iingongoma. Oku kuthetha ukuba abasetyhini kulindeleke ukuba banxibe headscarf xa ngaphakathi, njengoko oku kube ingqiqo entsha iindwendwe ezininzi non-Muslim Western, sincoma ukufunda indlela ukunxiba kakuhle oku kubalulekile iimpahla ezindilisekileyo ngaphambi kokuba bahambe.
Entry ukhululekile (nangona umnikelo omncinane negalelo yokondla jikelele isakhiwo kwabakhuthaza yokuphuma) yaye, kanye ngaphakathi, iifoto kunye flash kuvumelekile, ethetha nawe ukhululekile ukuba intabalala kwentsontelo elingaphakathi encomekayo mosque ngayo. ngokwendalo, yenzeka kungathethwanga, ukuba njengokuba Sultan Ahmed Mosque isekhona indawo esebenzayo yonqulo, ukuba uqiniseke ukuba ahlale cwaka ihloniphe isakhiwo kunye naziphi abanquli ngexesha lotyelelo yakho.
La Sagrada Familia Basilica ibeyinto nal lenkundla Spanish, nangona enyanisweni isakhiwo isalungiswa – nakuba umsebenzi waqala 1882, kube ngoku akukho kulindeleke ukuba igqitywe de 2026! Na lyo line, kule nkonzo semi-epheleleyo Roman Catholic sele i wobugcisa wezakhiwo, leyo eyenza iKapa ibe nomtsalane zingenakuphikwa kufuneka-ukubona iindwendwe abasuka kumhlaba wonke jikele.
Vula ukuba icawa kunye neendwendwe ukususela ngenkulungwane ye-19, I Sagrada Familia Basilica wena Ufumana 4.5 abatyeleli million kunyaka ngamnye kwaye ngoku isebenza inkqubo yokungena ticketed ngenxa – these are available to buy online up to two months before the date of your visit. Ezi amatikiti asebenza amaxesha yokungena olungatshintshiyo njengendlela yokunciphisa ingxinano, kunjalo, xa wena ngaphakathi kwenu sikhululekile ukuchitha nje ndingathanda ancome elingaphakathi obanelisayo. Sincoma evumela ubuncinane 2 iiyure ukuthatha kakuhle kule nto bokwakha. Ukuze iindwendwe abafuna ukuya enkonzweni, mass lubanjwe 9am zonke iiCawa 8 ebusuku njalo ngoMgqibelo, njalo 1 iyure kwaye olwenziwa ngeelwimi ezininzi.
La Sagrada Familia Basilica ngokusemthethweni iyasebenza ikhowudi yokunxiba eqhelekileyo Sonto Roman Catholic, kunjalo, oku bekungayi enyanzeliswayo ngokungqongqo njengoko kunjalo kwi-Sultan Ahmed Mosque okanye St Peter xa Basilica. Lo ukuba uthe, kodwa nangoku isiphakamiso lethu ukuba silandele lo ilokhwe ikhowudi xa kunokwenzeka, intsingiselo kufuneka asuse naluphi na headwear phezu entry, banxibe iimpahla nomzimba ongasentla ezifanelekileyo kele amagxa, emva, kunye midriff kunye banxibe legwear kele ngaphantsi kwethanga lika.
EYurophu kukho abantu abaninzi iindawo ezintle lonqulo ukudibanisa ngokwenene amandla nanto izakhiwo kunye nenkuthazo yenkolo. Ukuze ubone le amabala kuqala-ngesandla, ukuhamba kwilizwekazi ngololiwe ncwadi Gcina A Isitimela to leave no stone upturned across Europe’s many sights and attractions.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “3 Ekufuneka-Bona Iindawo Europe yonqulo” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-places-worship%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo kwi page yethu kunye ikhonkco ngasentla okanye sebenzisa ikhonkco embed.ly.
Kule linki ilandelayo, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, lo kuxhumana ukuba IsiNgesi iindlela emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, yaye uyakwazi ukutshintsha ts ukuba fr okanye ukukhupha ezincwadini kwiilwimi ezininzi ozikhethele.
LaSagradaFamilia Mosque train Travel traveltips esikaPhapha worship
Ndingumyili wokuqulathiweyo kwaye ndingumfazi oziqhenyayo ongumSilamsi ngexesha lam lasimahla ndibhala umxholo kwaye umsebenzi wam kukwenza abayas, ii-hijab kunye noluhlu lwempahla ezithobekileyo zamaSilamsi kubafazi. - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam